Sqribble bụ ikpo okwu a ma ama maka ịmepụta ma kesaa akwụkwọ dijitalụ gị - ha nwekwara ọtụtụ ndebiri gafee ọtụtụ ngalaba niche iji malite ịmalite. A bụ ihe nnyocha video:
Websitelọ Ọrụ Weebụ - Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime nke a maka ndị ahịa gị, ikpo okwu na-abịa na pọtụfoliyo iji mee ka ndị ahịa gị nwee mmasị. Tinye ma wepu ndi ahia ozugbo n’elu ikpo okwu.
Pịa site na ya ma ị ga - ahụ ọtụtụ puku akaebe banyere etu ikpo okwu si arụ ọrụ. Ha nwere ihe karịrị ndị ọrụ 30,000.